Maayarka Caasimadda Puntland oo markale fagaare kaga dhawaaqay in uu cabasho ka yahay Ariga yaacsan wadooyinka magaalada.,(READ MORE »)
May 14, 2019 Xafiiska Puntland Faallooyinka, Puntland, Somalia, Wararka Maanta 5
Duqa caasimadda Garoowe Axmed Siciid Muuse ayaa u hanjabay ri’yaha magaalada kadib markii ay shalay cuneen dhir dowladda hoose ku beertay qaar kamid ah jidadka Garoowe.
Dowladda hoose ayaa subaxnimadii shalay dhir badan oo timir ah ku beertay jidadka ku yaalla magaalada balse isla shalay ayaa ri’yo rabbaayad ahi feenteen dhirtaasi.
Haddaba duqa caasimadda ayaa qoraal uu xalay ku daabacay Facebook-ga waxa uu ku hanjabay in aan ri’yo dambe lagu arki doonin magaalada haddii aysan ceshan dadka leh.
Sidoo kale wuxuu sheegay in uu dhowaan soo saari doono amar lagu mamnuucayo ri’yaha magaalada Garoowe isagoo digniin ku bixiyay in dadka leh ay ceshadaan.
“Qofkii lehi ha maaraysto xoolihiisa ama yaanu ka daba iman markii la maareeyo” ayuu yiri duqa caasimadda Garoowe.
Hadalka duqa ayaa ku soo beegmay xilli saacadihii la soo dhaafay baraha bulshada ay qabsadeen sawirro laga soo qaaday ri’yaha oo cunaya dhirtii dowladda hoose ku beertay waddooyinka Garoowe.
Ciise Riyoole says:
Arriga waddanka ayeey leeyahiin. Ninkaan waa cunsuri. KKKKK
Geed hadii aad tilaaleysid waa in aad silig ku wareejisaa si eeyna xoolaha u cunin. Ma aha in ariga la xiro.
Muqdisha waxaa dhex buuxo arri carbeed dhirtana waxaa looga wareejiyaa silig.
Ninkaan Maayorka ah xaguu ka yimid uu ku dhaq naan jiray soo ma oga in Somaliya tahay waddan xoolaley ah.
Arriga waa xor. Majorka waa in xfiiskiisa lagu karantiilaa. KKKKKK
Humane socciety alert
Saaxiib marka hore aan ku saxo ee waa CIISE DHUUX ee ma aha magaca aad isku soo rartay, adigu na ma tihid reerkaas ahlu sharafka ah ee aad magaca ka dishay sida laga garan karo lahjaddaada iyo naaneystaas ay Soomaalida kale ku amaanto.
Marka labaad, hadalkaaga waa mid aad loo la fajaco xaqiiqdii ee aan laga filanin ruux wax qori iyo akhriyi kara. Xooluhu miyi iyo magaalo ayay kala leeyihiin oo waa qalad iyo xadaarad xumo in magaalo lagu dhex arko xoolo iska dhex meeraya.
Waa wax aad looga qajilo in caasimadda dhan ee Puntland oo ah geyiga Soomaaliya oogu baaxadda weyn ee ugu na hormarsan lagu dhex arko riyahan iskoriska ah ee dhex yoomaya. Reer Garoowe way ku ceebeysan yihiin arrinkaasi.
Mayorkaaf soomaali buu hayaa keliyah ee waa inuu wax ka bartaa Injineer yariiso Awoodiisa waa inuu SHARCIGA KU SOO Rogo wax allale wixii sumcada Caasimada meel uga dhacaya. AX awalba waa wax qabiil lagu doortay.
War ariga, qashinka iyo Nal la’aanta habeenkii sow ma ahan shaqadiina WAR JARTA AAD BCAYAAREYSAAN KA KECEE MAGAALADA KA SHAQEEYA
Ax nin wax yaqaan ayaa wax hagaajiya
Ariga maqaayadihii baan ka fadhinweynay